Allgedo.com » 2011 » February » 20
Home » Archive Daily February 20th, 2011 Mines Planted Near Kalshaale in Northern Somalia Feb 20, 2011 As you all may know there was heavy fighting between the people of Buuhoodle town and Clan Militias that were aided by Somaliland forces, the fighting left dozens dead on both sides with independent eye witnesses confirming that Somaliland and their clan militias suffered a heavy blow. The People of Buuhoodle and Sool Sanaag regions in general disdain any form of oppression having fought the British... Guddiga Gurmadka Abaaraha oo Biya dhaamin ka sameeyay Ceel-waaq. Feb 20, 2011 Guddiga gurmadka abaaraha gobolka Gedo ayaa kormeero iyo biya dhaamin ka wada deegaanno ka tirsan degmada Ceel-waaq ee gobolka gedo.
Wararka naga soo gaaraya Gedo ayaa sheegaya in biya dhaamin balaaran loo sameeyay shacabka ku dhaqan Miyiga Faafax dhuun iyo toban tuulo oo hoos yimaada magaalada Ceel-waaq.
Mas’uul ka tirsan guddiga abaaraha Gedo ayaa sheegay in kormeerka ay sameeyeen ay ku ogaadeen... Sheekh Xasan Daahir ” Ciidanka Afrikaanka ee Muqdisho kusoo duulay waa jabeen”. Feb 20, 2011 Hogaamiye k atirsan xoogaga Islaamiyiinta Soomaaliya ayaa shaaciyay in ciidamada shisheeye ay ku fashilmeen ujeedkoodii ay usoo galeen magaalada Muqdisho kadib 3 sano oo ay dagaalo ka wadaan Muqdisho.
Sheekh Xasan Daahir Aweys hogaamiyihii Xisbul Islaam hadana ka tirsan Shabaabul Mujaahidiin ayaa sheegay in hankii ciidanka shisheeye ka lahaayeen Muqdisho uu mugdi kusii dhacayo.
“Shacabka... Shil gaari oo ka dhacay degmada Matabaan ee Gobolka Hiiraan. Feb 20, 2011 Shil gaari oo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa duhurnimadii maanta ka dhacay inta u dhaxeysa Deegaanada Matabaan iyo Guriceel ee bartamaha Soomaaliya.
Hal ruux ayaa geeriyooday 3 kalana dhaawacyo fudud ayaa soo gaaray kadib markii gaari Xamuul ah uu maanta ku qalibmay Duleedka degmada guriceel ee Gobolka Galgaduud.
gaariga oo sida lasheegay ka amababaxay gudaha Gobolka Hiiraan ayaa siday Badeecado... Dagaallo Culus oo Meygaagley ka dhacay iyo Xoogaga SSC oo guulo sheegtay (Warbixin). Feb 20, 2011 Dagaalo culus ayaa dib uga qarxay deegaano ka tirsan gobalada Sool iyo Ceyn oo ay isku hayaan ciidamada maamulka la magac baxay Somaliland iyo kuwa deegaanka SSC ee u dagaalamaya oo iska caabin ku jira.
Wararka naga soo gaaraya Kalshaale iyo Meygaagley ayaa sheegaya in dagaalo gacmaha la’yskula tegay ka dhaceen. Sarkaal u hadlay ciidamada SSC ayaa sheegay in ay qabsadeen 6 gaari oo kuwa dagaalka... Hormuud oo qiima dhimis u sameysay Macaamiisheeda. Feb 20, 2011 Shirkada Isgaarsiinta Hormuud Telecom oo ka mid ah Shirkadaha adeegyada bulshada ee aas aasiga ka haqab tiray bulshada Soomaaliyed ayaa ku dhawaaqday inay qiimo dhimis ku sameeysay adeegii taleefanada gudaha, kadib markii ay aragtay daruufaha adag ee dalka ka jira, ayna qiimeysay baahida macaamiisheeda sharafta leh.
Hadaba qoraal saxaafadeedka ka soo baxay Shirkada Isgaarsiinta Hormuud oo nuqul ka... Xoogaga Islaamiyiinta oo soo bandhigay Meydadka Askar AMISOM ah. Feb 20, 2011 Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa maanta soo bandhigtay hub fara badan iyo Meydadka ciidamo Ugandha oo lagu soo qabtay dagaalkii shalay.
Munaasabad lagu marti qaaday saxaafadda madaxa banaan ee magaalada Muqdisho ayaa lagu soo bandhigay Meydadka ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM ee magaca Muqdisho Nabad ilaaliyaal ku jooga.
Afhayeenka Al Shabaab Sheekh Cali dheere iyo Sheekh Xasan Daahir Aweys ayaa goobta... Maamulka Jubbaland Diaspora Forum (JDF) ayaa ku tilmaamay gulufka colaadeed ee Doolow laga soo abaabulayo mid uuusan caqliga fiyow ogolaan karin Feb 20, 2011 Maamulka Jubbaland Diaspora Forum (JDF) ayaa ku tilmaamay gulufka colaadeed ee xiligaan adag laga soo dumaayo degmada Doolow inuu yahay mid aan macquul aheyn iyo wax uu ogolaan karo caqli bani’aadam oo fiyow.
Maamulka ayaa waxuu wal-wal iyo walaac aad u weyn ka muujiyay masiibada bani’aadam nimo ee ka dhalan karta dagaal adag oo waqtigaan ka dhaca gobolka Gedo.
Yuusuf Cabdi Boor oo ah Afhayeen... Guluf colaadeed Gobolka Gedo ku wajahan iyo waxgarad si weyn uga dayriyay cawaaqib xumada ka dhalan karta dagaal xiligaan gobolka ka dhaco Feb 20, 2011 Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo oo ay AOL ka heshay degmooyinka Soomaaliya ee xuduuda la leh dalalka Kenya iyo Itoobiya ayay si isku mid ah uga imaanayaan warar sheegaya in ciidamo huwan ah oo kaashana kuwa Itoobiya laga yaabo inay mar dhow duulaan kedis ah kusoo qaadaan magaalooyinka Beled-xaawo iyo Luuq.
Ciidamadaan oo ah kuwii taabacsanaa dowladda KMG ah iyo kuwa Ahlu suna Wal jameeca oo si... Radio Allgedo/ Waraysiyo